သစ်ခက်သံလွင် ကဗျာသုံးသပ်ချက်၊ ကိုနိုင်း ၏ " (ခေတ်ပေါ်ကဗျာအသွင်တူ အရောင်ကွဲများကိုခံစားမိခြင်း) "
on September 23, 2017 သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ - Articles myat hlaing
ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၃၀ )
ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေမှာလည်း ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံ၊ အကြောင်းအရာ မျိုးစုံ နဲ့ ရေးဖွဲ့နေကြပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာခေတ်ပေါ်ကဗျာရဲ့ပင်မရေစီးဟာ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ခေတ်ကို ကျော်ဖြတ်နေကြပါတယ်။
အရင်တုန်းကလိုအကြောင်းအရာတခုတည်းကို ဦးတည်ပြီးနိမိတ ပုံ တွေ ကွဲပြားစွာရေးဖွဲ့နေကြတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေထဲကလွတ်မြောက်နိုင် ခဲ့ပြီလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာရဲ့သတ်မှတ်ချက်တခုဖြစ်တဲ့ ခံစားမှုကိုအားပြုတဲ့ဖန်တီးမှုဆိုတာကိုတောင်မှ လက်မခံချင်ကြတဲ့ သဘောထားတွေကိုတွေ့မြင်နေရပါပြီ။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာရဲ့ဖန်တီးမှုကို ခေတ်ပြိုင်ကဗျာရဲ့ပြုလုပ်မှုတွေ၊ တီထွင်မှုတွေပါလာကြတာ တွေ့နေရပါတယ်။
ခံစားမှုသက်သက်ကိုအဓိကမထားတော့ပဲ၊ ခံစားမှုကိုဖန်တီးမှုနဲ့အရောင်ခြယ်သလို အရောင်အသွေးပေါင်းစုံ ပွင့်နေတဲ့ ပန်းခင်းကြီးကိုတွေ့နေရသလိုပါပဲ။ ဒီပန်းခင်းကြီးဟာ ဖန်တီးပြုပြင်ထားမှုတွေနဲ့ ပွင့်လန်းနေကြတဲ့ ရှုခင်းတခုပါပဲ။ တောတောင်ရေမြေတွေနဲ့ သူ့ရာသီအလိုက် ပွင့်လန်းလာရတဲ့ပန်းပွင့်တွေကို သဘာဝ အလျောက် ခံစားနေရတဲ့ခံစားမှုတွေတော့ ဖြစ်ပေါ်လာချင်မှဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာပန်း ခင်းကြီးဟာ အရောင်အသွေးစုံနေကြပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ အသွင်တူအရောင်ကွဲတဲ့ခံစားမှုကိုဖန်တီးမှုတွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ခေတ်တခုလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
ခံစားမှုသက်သက်ကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာမျိုးကို ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း (စက်တင်ဘာ) ထဲက ကဗျာဆရာ ခင်လွန်းရဲ့ ”ကြွေသူ” ကဗျာမှာ ခံစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
စစချင်းကဗျာပိုဒ်မှာ သဘာဝတရားအတိုင်းကြွေနေကြရတာကို ရေးဖွဲ့ ပြသွားပါတယ်။
ကွေကွင်းတရားနဲ့ အချိန်ကခြွေလို့ကြွေနေရတဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။ လောကမှာ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အဖြစ်တွေ ပါပဲ။ ချစ်ခြင်းတွေကွေကွင်းတာလည်း မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ ကြွေခြင်းပါ။
ဘဝတွေကြွေကုန်ကြတာလည်း မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သေခြင်းနဲ့ ကြွေနေကြခြင်းပါပဲ။
ခါတိုင်း မနက်များလို မှိုတက်နေတဲ့ပေါင်မုန့်ချပ်တွေ
စောစောစီးစီး ဒါ မီးသတ်ကားလား
အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ် ဖြတ်မောင်းသွားသလား
ခေတ်ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကို ကဗျာဆရာဟာ ဖန်တီးမှုမပါပဲရေးထားတာကို တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူခံစားနေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေ၊ သူ့နားထဲမှာကြားနေရတဲ့အသံတွေကို နိမိတ်ပုံယူပြီး ရှေ့ဆက်ဖို့ တည်နေ တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ကြည့်ချင်စိတ်ကို အတွေးတွေနဲ့ ခေါ်ယူသွားပါတယ်။
ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွှဲ ကမ္ဘာထဲက နေ့တနေ့မှာ
ကျွန်တော့်မှာလည်း တရာသီပြီး တရာသီ
ခေတ်တခေတ်ထဲမှာပဲ အသွင်တူအရောင်ကွဲနေတာကိုပြသွားပါ တယ်။ အယူအဆတွေက တဘက်ထဲ ရပ် တည်နေတာဖြစ်ပေမယ့်၊ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရောင်တွေကတော့မတူနိုင်ပါဘူး။
နေ့တနေ့ထဲမှာတောင် ရာသီလေးမျိုးပြောင်းသလို လူတွေရဲ့အမြင် မှာလည်း ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ရာသီပြောင်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည် ပြီးတော့ အရောင်တွေပြောင်းတဲ့အခါ ခံစားမှုတွေလည်း လိုက် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။
ခေတ်ပေါ်ကဗျာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပင်မရေစီးကြောင်းအသွင် က မပြောင်းလဲပဲ စီးဆင်းနေတုန်းပါ။ ခံစားမှုတွေကတော့ ပြောင်းလဲ နေမှာပါပဲ။ အရောင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာလည်းခံစားမှုအပြင် ဖန်တီး တီထွင်မှုတွေ ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတပုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ခံစားမှုကဲလားဆိုတာကိုလည်း သိနိုင်မှာပါ။
ဇူလိုင်လ ဗြူတီမဂ္ဂဇင်း ထဲက ကဗျာဆရာ ခက်သီ ရဲ့ ဘုရားသခင်အတွက် မေးခွန်းဆိုတဲ့ ကဗျာကို ဖတ်ပြီး ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။
ဆီဇာဟာ ကလီယိုပတ်ထရာရဲ့ရင်သားထက်မှာ စစ်ရှုံးခဲ့တယ်
မင်းရဲ့ ဦးခေါင်းထဲ ယမ်းဘီလူးတွေတပ်ဆင်ထားရင်
မင်းရဲ့နှလုံးသားမှာ ဘယ်ချိုးငှက်မှ သံလွင်ခက်နဲ့ရောက်မလာဘူး
မင်းရရှိမှာ ဆူးခက်သရဖူနဲ့ လှောင်ပြောင်သရော်မှု
မင်းရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ချိန်ကို လူသားတွေက ကျောခိုင်းလို့
ငတ်မွတ်နေနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ခြေတဖက်ပြတ်
လူတိုင်းက ယေရှုမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဖြစ်ချင်းဖြစ် နပိုလီယံပဲဖြစ်မယ်တဲ့
စစ်ပွဲတွေ ဘယ်နည်းနဲ့ ပြီးမလဲ
ဘုရားသခင်သာ ဖြေနိုင်မယ့် မေးခွန်းပဲ။
ဒီကဗျာကို ရောမကိုလမ်းတိုင်းကရောက်နိုင်ပေမယ့်၊ စစ်ကြီးဖြစ်နေချိန်မှာ ရောမကနေ ရောက်နိုင်တာ သေ ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြနေခဲ့တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ နောက် စစ်ပွဲတွေက ဘဝတွေပျက်သုဉ်းခြင်းကိုပြတဲ့ နိမိတ်ပုံအဖြစ် နပိုလီယံရဲ့ဆီဇာတို့ရဲ့ဘဝတွေရဲ့ပျက်သုဉ်းခြင်းကိုပဲ သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ သစ္စာဖောက် တယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးကျဆုံးခြင်းနိဂုံးနဲ့ စစ်ကြောင့် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အဘွားအိုတယောက်ရဲ့ မျိုး ဆက်၏များ ဆုံးရှုံးသွားရခြင်းတွေ၊ စစ်ပွဲမှာ စစ်သားတယောက်ရဲ့ ခံစားမှုတွေကို ပြသွားပါတယ်။
ဒါတွေဟာ ကဗျာဆရာရဲ့ခံစားမှုကို ဖန်တီးထားတာတွေစွက်ဖက်ပြီးရေးသွားတာကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေရဲ့ခေတ်တွေပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်မှာ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသလား။ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။
ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အတော်ကြီးကိုလေးနက်စွာ လေ့လာခံစားကြည့် ရတော့မှာပါ။ စက်တင်ဘာလထုတ် Idea မဂ္ဂဇင်းထဲက ရိုးသက်ရဲ့ ကောက်ကွေ့ခဲ့တဲ့လေချွန်သံ ကဗျာကို ခံစားကြည့်မိပါသေးတယ်။
ဘာမဆို ရောင့်ရဲမှုကင်းကင်း မကွေ့မဖြစ်များ
နဂါးလှည့်မသင့်လို့ပါဆိုတဲ့ ပေါက်ကြေးဖွင့်လှစ်မှုနဲ့ ယှဉ်လာရင်တော့
နီကြင်ရွက်ကြွေပေါ်မှ ဟန်ချက်ပျက်စွာ ခုန်ဆင်းသွားတယ်
ကျွန်တော်တို့မှာလည်း ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေကို မခံမဖြစ်ဖတ်ချင်စိတ်နဲ့ အမြဲဖတ်မိပြီး ခံစားနေရဦးမှာပါ။ နီကြင်ရွက်ကြွေပေါ်က ဟန်ချက်မပျက်အောင်လည်း သတိထားရမှာပါ။
ပြောမယ်ဆိုရင် ခံစားမှုသက်သက်ရေးကြတဲ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေထဲမှာ ဖန်တီးမှုသက်သက် ဖြစ်လာတာ တွေမများနိုင်ဖို့အတွက်တော့ ချင့်ချိန်ရပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင် ခုန်ဆင်းသွားတဲ့ နီကြင်ရွက်ကြွေတရွက်လို ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ဖုန်အလှေးလှေးထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ခေတ်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေကတိုးတက်လာသလား၊ ဆုတ်ယုတ်သွားသလား ဆိုတာကိုလည်း ခံစားသုံးသပ်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။
၁။ ခင်လွန်း(ကြွေသူ)၊ ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာ၊၂၀၁၇။
၂။ ခက်သီ(ဘုရားသခင်အတွက်မေးခွန်း)၊ ဗြူတီမဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင်လ၊၂၀၁၇။
၃။ ရိုးသက်(ကောက်ကွေ့ခဲ့တဲ့လေချွန်သံ)၊ Idea မဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာလ၊၂၀၁၇။
The Sun Rays Journal, Vol 1. No 166 . 23 Sep 2017